१६.११ अंकले घटेको बजारमा ८ अर्बमाथिको कारोबार | Artha News Nepal
Home	शेयर बजार	१६.११ अंकले घटेको बजारमा ८ अर्बमाथिको कारोबार
१६.११ अंकले घटेको बजारमा ८ अर्बमाथिको कारोबार
काठमाडौं – साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ११ अंकले घटेर २ हजार ५२६ दशमलव ९२ विन्दुमा बन्द भएको छ । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १ दशमलव ६६ अंक घटेर ४६३ दशमलव ४७ विन्दुमा झरेको छ ।
नेप्से परिसूचकले समग्र धितोपत्र कारोबारको मापन गर्दछ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्सले ठूला कम्पनीहरुको मात्र कारोबार मापन गर्दछ । २ हजार ५५२ दशमलव ३४ विन्दुदेखि खुलेको बिहीवारको बजार २ हजार ५६५ विन्दुसम्म पुगेको थियो । साताको अन्तिम कारोबार दिन र बुधवार बढेको बजारबाट नाफा बुक गर्ने हावी हुँदा बजार प्रभावित बनेको हो ।
यसदिन २०६ ओटा कम्पनीको ७२ हजार ७३७ पटकको व्यापारमा रू. ८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ३२ हजार बराबरको १ करोड ६० लाख ५८ हजार ४५८ कित्रा शेयर कारोबार भएको छ ।
बुधवारको तुलनामा नेप्से परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । बुधवार रू. ७ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख ११ हजार बराबरको १ करोड ४९ लाख ६ हजार ७७ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
बिहीवार कारोबार रकममा सर्वाधिक हिस्सा डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. ५६ करोड ६३ लाख २९ हजार बराबरको २ लाख ८० हजार ३२९ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
बिहीवार गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत कम २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको उक्त कम्पनीको शेयर विक्री चापका कारण मूल्य पनि घटेको छ । गत वर्ष ३० प्रतिशत बोनस शेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको कम्पनीले यस वर्ष १५ प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
कम लाभांशका कारण बिहीवार विक्री चाप हुँदा उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत घटेको छ । प्रतिकित्ता रू. २१९ ले घटेर कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार ९७३ कायम भएको छ ।
बिहीवार लाभांशकै कारण सपोर्ट लघुवित्तको शेयरमूल्य पनि सर्वाधिक १० प्रतिशत घटेको छ । यस वर्ष लाभांश नदिने सूचना बिहीवार सार्वजनिक भएसँगै उक्त कम्पनीको शेयरमा पनि विक्री चाप देखिएको थियो ।
यसदिन कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. २३५ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ११५ कायम भएको हो । यसदिन दोहोरो अंकले घटेको बजारमा चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य ५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ९ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १८८ पुगेको हो ।
बिहीवार विकास बैंक समूहको परिसूचक सर्वाधिक शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतले बढेको छ भने लघुवित्तको सर्वाधिक २ दशमलव ८८ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसदिन विकास बैंकसँगै बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत परिसूचक बढेको हो भने बाँकी समूहको घटेको छ ।
लघुवित्तसँगै व्यापारिकको १ दशमलव ३८ प्रतिशत, होटलको २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत, जलविद्युतको १ दशमलव ३१ प्रतिशत, वित्तको १ दशमलव ५३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको १ दशमलव ५६ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको १ दशमलव ८५ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको १ दशमलव १६ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो ।
कारोबारनेप्सेनेप्से परिसूचकबजारशेयर बजार